Tags : sithu
By : sithunaung on May 22, 2010
Score: 110 Rating: 5.00 Comments: 44
~ရင်ခွင်မှာနွဲ့ကာအားကိုးတဲ့သူရယ်~~နွေးနွေးထွေးထွေးရင်ခုန်တယ်~မှေးစက်နော်အသည်းဝယ်~မောပမ်းလို့ နွမ်းလို့ရင်~~မောင်ချော့ကာသိပ်ပါ့မယ်~ အေး~အေး~~အေးအိုး~~အချစ်ရယ်~~အိပ်တော့ကွယ်~~း) ~~ဒီသီချင်းကိုဆိုဖို့အကြံပေးတဲ့ ညီမလေးစူစန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်~~~THANK U ALL :)))))
alwan on Oct 18, 2010 0
maysanshar on Jun 12, 2010 0
so nice song par bro....*****
love this song, love your vocal and singing! .. x3 stars tway u lite tot :) ***************************************************
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis panshwe ရေ~~~:)
turikimuriki on May 23, 2010 0
really nice one ... ***** :-)
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis turiki ရေ~~~:)
hippo on May 23, 2010 0
one of my favourite ... you sang really nice ... ***** :)
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis hippo ရေ~~~:)
naymin15 on May 23, 2010 0
bro ရေကောင်းမြဲအတိုင်းးကောင်းးနေဆဲပါဗျာ..အား ပေးနားဆသွားတယ်နော်...*********:)
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro naymin ရေ~~~:)
Zarmaung on May 23, 2010 0
so htar tar lay ayann kg tal byar..so htar tar aye aye lay nea' ayan listen loz kg tal..*********For Bro.
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro zarmaung ရေ~~~:)
nawsis on May 23, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro nawsis ရေ~~~:)
Taw_Thar_Lay on May 23, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် UTTL ရေ~~~:)
lwantatthu10 on May 23, 2010 0
တကယ်ကို နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ် bro ရယ် ... ငြိမ့်ငြိမ့်အေးအေးလေး နော် .. *************************
sithunaung on May 23, 2010 0
d song lay.. nite kaanaw.. listen pe.. so ma lar lo.. sinn sar yone shi tay tal...atoe cheeeee ka... kit twar p...taw taw thwat tae... lat....he he..a toe chee so twar tarayan mite tal... lan htwat nay tar pal.. nyiange sone lay lar yout arr pay nar sin twar par tal khinbya...:( ..
sorri pr nyi yer..,nout so yin message send hter lay bro g ko kyo tin pi tot~nyi so mel .,bro g ka na wait per loet ha ha:) just kidding ~~thz alot nyiange sone lay :)))
201"song lay kaayann ko Lann sann nay tal...Mite hla chi larr bro g yayttt......Very very Nice &perfectly sang...& luv it susan layy Idea....LUV it ..LUV it.... All Million stars:***:****:****:***:*****:**bravooooooo .....sannmya narr sinn khan sarr twer par tal shint:))))
susu23 on May 23, 2010 0
bro sithu yaydlo song lal xo htar ayan kg tel ma su arr pay thwar par tel shin**********4u.......:))))))))
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis susu ရေ~~~:)
jpkglay on May 23, 2010 0
ကောင်းလိုက်တာဗျာ.. ကိုစည်သူကြီး....... လန်းတယ်ဗျာ..... fully voted for you!!!!!!!!!!!!!!!
DecemberLion on May 23, 2010 0
ကောင်းလိုက်တာ အကိုကြီး ဦးစည်သူနောင်ရေ... ဦးစိုးပိုင် ဒီသီချင်းဆိုကာစက သမီးတို့မမွေးသေးပဲ သမီးတို့ ဘဘကြီးတွေဘွဲ့ရပြီး ဖေဖေ (ဦးအောင်ခိုင်)တို့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က တဲ့...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးဒီဇင်္ဘာခြင်္သေ့ရေ~အမယ်လေးနာမည်ကကြောက်ချာဂျီးပါရား~:P~ ဖေဖေဦးအောင်ခိုင်ဆိုတာကရုပ်ရှင်မင်းသားဦးအောင်ခိုင်လား~SFY ကအဆိုတော်ဦးအောင်ခိုင်လား~ဘယ်သူတုံးကွဲ့မီးမီးရဲ့~းP~~:))
yellownavy on May 23, 2010 0
Yellow တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေဖေနားညည်းအောင် ဖွင့်ခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါ့... အခုထိအလွတ်ရနေသေးတယ်... ကိုစည်သူဆိုသွားတာ တကယ်ကို အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေး... အရမ်းကောင်းပါတယ် 5*
ပြောချင်တာကခုတဲ့အထိကိုဒီသီချင်းနဲ့မလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုတဲ့သဘော~းP~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis yellow ရေ~~~:))
ayoelay on May 23, 2010 0
တစ်နွှဲ.တစ်နှောင်းလေး ကောင်းလှပါတယ် bro Sihtu ရေ :P ****************************************
:))~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro ayoelay ရေ~~~:)
songlover015 on May 23, 2010 0
sithu yay~ kg chat kwal...VERY NICE.... ((ချော့သိပ်လိုက်တာ အိပ်သွားဘီလား :p ))
အိပ်တော့မယ်~ရှူး! တိုးတိုး~းP~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis songlover ရေ~~~:)
maung309 on May 23, 2010 0
Ko Sithu yay... so htarr tar ahtoo bae kaung par tal... Bravoooooooooooooooo *******4U
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် uncle maung ရေ~~~:)
soramoe on May 23, 2010 0
Bro SSithu ဒီ သီ ချင်း ဆို ထား တာ တော် တော် ကောင်း တယ် ။ အ သံ နဲ လဲ လိုက် တယ် .. good idea from Susan ... all starssssssssssssssssssssssssssssss
susannyunn on May 23, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးးးး ကစူစန့်ဒယ်ဒီ favourite လေးးး ပါ :))) တူအမြဲတမ်းရှိုနေလို့စူစန်တောင်အကုန်ရနေပြီကော အဟီးးးးး:)))) ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအရမ်းကိုလိုက်ဘက်လှပါတယ် :mm :mm ဘရိုဂျီး C2 ဂျီး ချင့် >>> VIDEO လေးးး နဲ့ဘရိုဂျီး အရှိုလေး အရမ်းကို MATCHED ဖစ်သွားပါတယ် :yes :atb :atb :clap ;clap :clap သီရှိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဂျူးအနန္တပါချင့် :thanx ဘရာဗိုဗိုဗိုဗို ********************************************************>>>>>>>>>
ညီမစူစန်လေးသဘောကြတယ်ဆိုလို့ဆိုရကြိုးနပ်သွားပါပြီ~းP~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis g S1 ရေ~~~:)))
snowgirl on May 23, 2010 0
bro yay bro voice nae lite tal, sis susan idea nae sing fit thwar loetayan pal listen loet kg pa shin, cha noe gal layy arr pay thwar par dal ;clap; ;clap; *******
dimpleminle on May 23, 2010 0
အရမ်းကောင်းတယ် bro sithu ရေ ..အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်....5******************
ဦးဦးဖျားဖျားအားပေးသွားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis dimpleminle ရေ~~~:)